VaMoses Mzila-Ndlovu Vanoumba Bato Ravo Idzva
VaMoses Mzila Ndlovu
Vamwe vanhu vanoti kunyange hazvo chiri chokwadi kuti matunhu eMatabeleland ndemamwe ematunhu akasaririra kumashure zvikuru munyaya dzebudiriro munyika, vezvematongerwo enyika havafanirwe kuyedza kushandisa nyaya iyi senzira yekuda kupatsanura vanhu munyika kuchishandiswa nyaya yemarudzi.
Pfungwa idzi dzinotevera kuzivisa kwakaitwa nevaimbove munyori mukuru webato reMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube, VaMoses Mzila Ndlovu, kuvepo kwebato rezvematongerwo enyika idzva reAlliance for National Salvation kuti ANSA nemusi weMugovera.
VaMzila Ndlovu vakaudza vatori venhau kuti vaive vaona zvakakodzera kuumba bato iri nekuti kusvika pari zvino, mapato ose arimo munyika ari kutadza kukoshesa kugadziriswa kwematambudziko ekusarira mumashure munyaya dzebudiriro akatarisana nematunhu eMatabeleland.
Vakatiwo chinangwa chavo ndechekuti pave nebato rinotungamirirwa nemunhu anobva kuMatabeleland, kwete kuti munyika mungove nemapato anotungamirirwa nevanhu vanobva kuMashonaland, vanhu vekuMatabeleland vachiitwa vatevedzeri vevakuru vemapato aya.
Vachipa maonero avo panyaya iyi, mudzidzisi wePeace and Conflict Studies paZimbabwe Open University, VaDidmus Dewa, vanoti ikodzero yemunhu wese munyika kupinda mune zvematongerwo enyika asi izvi zvinofanirwa kuitwa pasingashandiswe nyaya yekuda kupatsanura marudzi munyika.
VaMzila Ndlovu nevamwe vane chitsama vakabuda mubato raVaNcube iri pakutanga kwegore rino mushure mekusawirirana nevamwe vakuru vakuru vebato iri.
VaMzila Ndlovu, avo vakarwa hondo vari nhengo yeZipra, vakambovewo gurukota rezvekuregererana nekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa.
VaMzila Ndlovu vakaramba pfungwa yekuti vakavamba bato reANSA senzira yekutsvaga mari vachiti bato ravo richakwikwidza musarudzo dza2018 asi vakazvipira kushanda nemamwe mapato anokoshesa maonero ebato ravo.
Vachipa muenzaniso wamushakabvu VaJoshua Nkomo avo vakave mumwe munhu wekutanga munyika kurwisa hutongi hwevatema, VaDewa vakati vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika akawanda akabva kumatunhu eMatabeleland nekune dzimwe nzvimbo munyika.
Mashoko aVaDewa anotsinhirwa nevakafanobata chinzvimbo chemutauriri weZAPU, VaIphithule Maphosa, avo vanoti hapana mutemo wemunyika uri pachena kuti chizvarwa chose chemuZimbabwe chinokwanisa kuve mutungamiri wenyika zvisinei kuti munhu akazvarirwa mudunhu ripi.
Vakafanobata chinzvimbo chemunyori wezvekufambiswa kwemabasa mubato reANSA, Amai Annastacia Chikuni, vanoti vanotarisira kuti bato ravo richabudirira muzvinangwa zvaro uye vanotarisirawo kuti vachawana vatisgiri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Vamwe vanoti kunyange hazvo iri kodzero yemunhu wega wega munyika kuti aite kana kutevera bato rezvematongerwo enyika raanoda, chakanyanyokosha pari zvino inyaya yekuti mapato anopikisa abatane kuitira kuti agokwanisa kubvisa VaMugabe nebato reZanu PF pachigaro.
Mapato anopikisa ari pakati pekutsvaga nzira dzekuti angashande sei pamwe chete sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzasvika.